Kodzero-dzevanhu, 29 Gunyana 2017
Chishanu 29 Gunyana 2017
Gunyana 29, 2017
Varairidzi Vanoratidzira kuMaruwa Vachiti Vari Kuomerwa neHupenyu
Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vanoti vari kufara zvikuru kuti hurongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita neChishanu, hwabudirira chose.
Magweta aVaMawarire Okumbira Dare Kurasa Mhosva Yavari Kupomerwa
Chief Inspector Martin Runganga vakafananidza Pastor Mawarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende
Vatori veNhau Vanorohwa Zvakaipisisa neMapurisa
Vatori venhau vaviri vanoshandira bepanhau reDaily News varohwa zvakaipisisa nemapurisa pavanga vachiita basa ravo vakaitwa kafiramberi zvichitevera kuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka.
VaBiti Vanoti Ndivo Chete Mutungamiri wePDP
VaBiti vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirirwa nemutevedzeeri webato iri, VaKucaca Phulu, kutungamira bato ravo munhaurirano nemamwe mapato.
Gunyana 28, 2017
Bato rePDP Ropindwa naPongwe
Mutauriri wePDP, VaJacob Mafume, vanoti VaBiti ndivo mutungamiri webato zviri pamutemo.
Vakawanda Vanoti Vacharamba Vachishandisa "Social Media" Mukutaura Zvavanoda
Dare reamakurukota rakabuda nechisungo chekuvandudza mitemo inobata kufambiswa kwemashoko pamadandemutande, zvichitevera kufamba kwakaitika mashoko pamusoro pekushaikwa kwezvinhu muzvitoro, izvo zvakapa kuti paite chipatapata vanhu vachinotenga zvinhu muzvitoro.
Gogo Msika Vanoradzikwa kuHeroes Acre VaMugabe Vachituka Vana "Judas Iscariot" muZanu PF
VaMugabe vati vanhu ava vane chinangwa chekusvibisa zita ravo kuti vapandukirwe neveruzhinji.
VaMafume Vanoti VaBiti Chete Ndivo Mutungamiri wePDP, Kwete Amai Matibenga
Asi munyori mukuru wePDP, VaGorden Moyo, vanoti Amai Matibenga ndivo vava panyaya dzebato ravo.
Mashoko aVaMugabe paMitengo Okonzera Mutauro Munyika
Munyika maita kusawirirana kukuru panyaya yekuti chii chapa kuti mitengo yezvinhu idhure.
Mamwe Masangano Otsigira Kuratidzira kweSangano reARTUZ
Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vanoti vari kufara zvikuru nekuti mamwe masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji vari kutsigira hurongwa hwavo hwekuratidzira hwavachaita nemusi weChishanu.
Gunyana 27, 2017
Ambuya Msika Vanorangarirwa muBulawayo Vasati Varadzikwa kuHeroes Acre neChina
Vanhu vane chitsama vaungana paSt John Anglican Cathedral muguta reBulawayo Chitatu mangwanani pamunamato wekuwonekana nemushakabvu, Ambuya Maria Msika, mudzimai wevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, mushakabvu Joseph Msika.
Zvitoro Zvokwidza Mitengo yeZvinhu Zvinonetsa Kuwana
Vamwe vagari vemuChinhoyi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa kuvabhadharisa mari yakawanda pazvinhu zvavari kutenga vachitora mukana wekushaikwa kwemari nekushomeka kwezvekudya muzvitoro.